विद्यार्थी किशोरीलाई घरमा नै बोलाएर दु’श्कर्म गरेको अभियोगमा भाजपा नेता डा. द्धिवेदी पक्राउ:: Naya Nepal
विद्यार्थी किशोरीलाई घरमा नै बोलाएर दु’श्कर्म गरेको अभियोगमा भाजपा नेता डा. द्धिवेदी पक्राउ
काठमाडौं । भारतमा अहिले लगातार बालिका र महिलाहरु असुरक्षित बनेका अनेक घटनाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । विशेष गरेर उत्तर प्रदेश हाथरस र बलरामपुर त्योपनि सामूहिक दु’श्कर्मीबाट बालिका र युवती जोगाउन नसकेका घटनाको बारेमा निरन्तर चर्चा भइरहेको छ ।
यसै बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक नेतालाई प्रयागराजमा नियन्त्रण गरिएको छ । पीडित स्नातक तहको छात्रा भएको खुल्न आएको छ । बीए अध्यनरत विद्यार्थीले जिल्लाको कर्नलगञ्ज प्रहरी चौकीमा उक्त नेताले आफुमाथी दु’श्कर्म गरेको मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
हाथरस प्रकरणको नाजुक अवस्था पछि छवि सुधार्ने प्रयासमा उत्तर प्रदेश प्रहरीले प्रयागराजमा सामूहिक दु’श्कर्मको आरोपमा भारतीय जनता पार्टी नेता डा. श्याम प्रकाश द्विवेदीलाई नियन्त्रण गरेको छ । यस घटनामा प्रयागराज प्रहरीले अर्का आरोपी डाक्टर अनिल द्विवेदीलाई कारावास पठाएको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले डा. श्याम प्रकाश द्विवेदीलाई पक्राउ गरेको छ । पीडित एक विद्यार्थी हुन् र बीए पढ्दै छिन् । पीडितले प्रयागराजको कर्नलगञ्ज प्रहरी चौकीमा दु’श्कर्मको मुद्दा दर्ता गरिएको हो । दु’श्कर्मको मुद्दा लेखिएपछी भाजपा नेता डा. श्याम प्रकाश द्विवेदी फरार रहेका थिए । तर प्रहरीले शनिबार भाजपा नेतालाई पक्रिन सफल भएको हो । हाथरस घटनाको कारण, भाजपा तिव्र आलोचनाको सिकार भइरहेको छ ।
विपक्षी दलहरु यूपीको योगी सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न खडा गरिरहेका छन् । दु’श्कर्म प्रकरणमा एक भाजपा नेताको पक्राउ भएपछि पार्टीविरुद्ध उठेको विरोधमाथि तेल थप्नाका लागि पर्याप्त हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यस अघि उन्नावका भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेङ्गर पनि दु’श्कर्मको आरोपमा दोषी ठहरिएका थिए जसले गर्दा भाजपाले घेराबन्दीमा परेको थियो । तर उनीमाथि कुनै ठोस कारवाही भने नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल तथा पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको पिसीआर परीक्षणमा ४२ र दैलेख अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा नौ गरी ५१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य शिक्षा शाखाका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।